प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाईका लागि उजुरी आह्वान - Nepal Samaj
प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाईका लागि उजुरी आह्वान
२१ असोज, २०७७नेपाल समाजबाग्मती, मुख्य समाचार, राजनीति
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सरकारद्वारा बिभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाईका लागि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिाकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाईका लागि १० दिने उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । समितिले प्रस्तावित राजदुतहरुलाई १० दिनसम्म उजुरी आह्वानका लागि म्याद दिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यसपछि सो उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रस्तावित राजदुतहरुको सुनुवाई हुनेछ । समितिले राजदूतमा प्रस्तावितहरुको नाम अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।